Alxanka Alxanka - Qingdao TianHua Yihe Warshadda Macdanta
Alxanka Qingdao TianHua wuxuu awoodaa inuu bixiyo xalal bir culus oo been abuur ah oo labadaba si hufan loo sameeyay waxna u taray. Waan kuu shaqeyn doonaa si aan u go'aamino nooca ugu fiican ee birta qaabdhismeedka mashruucaaga. Nidaamyada loo isticmaalay in lagu qaabeeyo birta qaabdhismeedka ayaa beddeli kara qiimaha. Birtu waa shey aad u fiican, waara oo aad u waara, laakiin waxay aad uga waxtar badan tahay gacmaha injineero khibrad leh oo fahmaya sifooyinka ay leeyihiin iyo faa'iidooyinkooda.
Qingdao TianHua waa shahaado la siiyay ISO 9001 & ISO 3834-2, hawl wadeenada alxanka waa la tababaray oo EN ISO 9606-1 ayaa shahaado leh. Been sameynta birta qaaska ah waxay u baahan tahay adeegsiga nooca saxda ah ee alxamida si loo hubiyo jiritaanka qaab dhismeedka birta. MIG, TIG, Oxy-Acetylene, alxanka qaansada iftiinka, iyo qaabab kale oo badan oo alxamid ah ayaa loo heli karaa si loogu amaano noocyada gaarka ah ee biraha iyo dhumucda macaamiilku u baahan doono si loo soo saaro qalabka macaamiisha ay u baahan yihiin.
Alxanka iyo Mashiinku wuxuu u heellan yahay hagaajinta geeddi-socodka joogtada ah ee guriga CWI. Alxanleyaasheennu waxay la kulmi karaan heerarka tayada ugu sarreeya si ay ula kulmaan caqabadaha ku siin doona shaqo tayo leh si joogto ah. Waxaan sii wadeynaa inaan soo iibsano qalabka alxamida cusub ee cusub si aan u noqono dukaanka ugu wanaagsan ee lagu been abuurto ee aan noqon karno.
Awoodda Alxanka Warshadaha SVEI